जमघट, कार्यक्रम नगरौं, साबुन पानीले राम्रोसंग हात धुने बानीबसालौं’■ डा. राघबप्रसाद धिताल - Himalayamail.com
जमघट, कार्यक्रम नगरौं, साबुन पानीले राम्रोसंग हात धुने बानीबसालौं’■ डा. राघबप्रसाद धिताल
चिनको वुहान प्रान्तबाट गत वर्ष सुरु भएको कोरोना भाइरसलेविश्वभरका मानिसलाई आतंकित बनाएको छ । चीनपछि यूरोपमा (हालसम्म) सबैभन्दा धेरै इटालीमा संक्रमण देखिएको छ । इटालीमा एक हजार भन्दा बढीको मृत्यू भैसकेको छ । बेलायतमा योसंक्रमण र मृत्युदर आक्रामकरुपमा बढ्दो छ । यसै सिलसिलामा बेलायतमा लामो समयदेखि कार्यरत एकजना चिकित्सक तथा वरिस्ठ जीपी डा. राघवप्रसाद धितालसँग नेपाल पत्रकार महासंघ बेलायत शाखाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्याम लुईटेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
जरो आएको छ, रुघा खोकी, फ्लुको जस्तो लक्षण देखिएको छ भने कहाँ सम्पर्क गर्ने? कसरी सुरक्षित रहने?
जरो, रुघा र खोकी लाग्यो भने कम्तीमा एक सातासम्म घरमै बस्ने । पारासिटामोल, न्यूरोफिन समय समयमा खाने गर्नु पर्छ । त्यसबाहेक तातोपानी र भिटामिन सी पाईने खानेकुरा खानु पर्छ, जसले शारीरिक रुपमा रोगसँग लड्न सक्ने प्रतिरोध क्षमता वृद्धि गर्छ । एक साता घरमा क्वारेन्टाइनमा बस्दा पनि ठिक भएन भने १११ मा फोन सम्पर्क गर्नुपर्छ । १११ मा तत्काल फोन लागेन भने अनलाईन मार्फत पनि सम्पर्क गर्न सकिन्छ । एनएचएसको टोलीले तपाईलाई कसरी अघि बढ्ने भनेर जानकारी दिन्छ ।
जरो आएपछि जीपी कहाँ फोन गर्नुभन्दा पनि एनएचएसको हटलाईन १११ मा सम्पर्क गर्दा राम्रो हुन्छ । बेलायत सरकारले कोरोना भाइरसकै लागि भनेर १११ हटलाइन सुरु गरेको छ । अंग्रेजी भाषामा एनएचएसमा सम्पर्क गर्न गाह्रो भए आफन्त वा अन्य नेपालीसँग फोन मार्फत सहयोग माग्दा राम्रो हुन्छ ।
बजारमा दाल, चामल लगायत अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव हुँदै गएको जस्तो देखिन्छ ? कति हप्ता वा महिनाका लागि सामग्री जोहो गर्नु पर्ला?
घरवाट बाहिर जांदा वा घर आउँदा प्रत्येक पटक साबुन पानीले कम्तीमा २० सेकेन्ड धुनुपर्छ । कोही व्यक्ति घर आउँदा उनीहरुलाई पनि हात धुन भन्नु पर्छ । यो संक्रमणबाट आफु मात्र जोगिएर हुंदैन सबैजनाजोगिनु पर्छ । त्यसकारण अरुलाई पनि साबुन पानीले हात धुन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।
भूपू गोर्खा वृद्ध वृद्धाहरु जसलाइ अंग्रेजी बुझ्न मुस्किल छ, उहांहरुलाई नजिकको नेपालीले फोन मार्फत सहयोग गर्न सक्छन् । त्यसबाहेक पनि बृद्धबृद्धाहरुले नयाँ पुस्तासँग पनि सहयोग माग्न हिच्किचाउनु हुदैन । समाजमा हातेमालो गर्ने बेला भनेकै यही हो ।
समाजमा बसेपछि त्यसप्रति उत्तरदायित्व हुन्छ । बेलायत सरकारले पटकपटक यस्ता कार्यक्रम नगर्न, भीडभाडमा नजान र जमघट नगर्न भनि सकेपछि हामीले पनि त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ । कतिपय संघसंस्थाले अटेर गरिरहेका छन् । त्यो समुदायप्रति उत्तरदायी नहुनु हो । सरकारले ठूला ठूला धनराशी खर्च भएका फुटबलका कार्यक्रमहरु स्थगित गराइरहेको छ । हामीले पनि जमघट र खादा-मालालाई तत्काल रोक्नु पर्छ । यो महामारीबाट नेपालीहरु जोगिनु पर्छ । त्यसका लागि सावधानी जरुरी छ ।
७० बर्ष पुगेका र कुनै न कुनै रोगको उपचार गराई रहेकालाई के सुझावदिनु हुन्छ ?
यो कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न लामो समय लाग्ने देखिएको छ । त्यसकारण ७० वर्ष पुगेका बुवा तथा आमाहरुले अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्कन अनुरोध गर्दछु । बिरामी व्यक्तीलाई पनि यो भाइरसले आक्रमण गर्ने हुंदा एनएचएसले तोकेजस्तै अरु मानिसहरुबाटकम्तिमा २ मिटर टाढा बस्ने गर्नुपर्छ ।